’36 sano ka hor ayuu qof nafteyda badbaadiyay anigana hadda ayaan naf badbaadiyay’ |
’36 sano ka hor ayuu qof nafteyda badbaadiyay anigana hadda ayaan naf badbaadiyay’
Isbuucii lasoo dhaafay waxaa caasimadda dalka Hindiya ee Delhi ka dhacay rabshado diin ku saleysan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 46 ruux. Laakiin Aabe iyo wiilkiisa oo heysta diinta Sikh ayaa badbaadiyay dad badan oo muslimiin ah.
Mohinder Singh waxay dhacdadan soo xasuusisay mar isaga qudhiisa ay naftiisa halis gashay 36 sano ka hor, xilligaas oo ay noloshiisa badbaadiyeen dad kale oo aysan isku diin ahayn.
Intii ay socdeen rabshadaha uu dhiigga badan ku daatay, isaga iyo wiilkiisa Inderjeet waxay dadka ku qarinayeen gurigooda, kaddibna waxay xaqiijinayeen sidii ay meel nabad ah ku geyn lahaayeen.
Qalalaasaha ruxay qeybo ka mid ah magaalo madaxda Hindiya waxaa sababay sharciga dhalashada ee muranka dhaliyay.
“Ma jirin qof kale oo ku dhiirraday inuu na caawiyo, ninka heysta diinta Sikh iyo wiilkiisa ayaa dadka muslimiinta ah ku badbaadinayay mootooyinkooda”, ayuu yiri Mohammad Hamza, oo ka mid ah dadkii loo gurmaday.
Qaar ka mid ah dadkan, oo la hadlay BBC Punjabi, ayaa sheegay inaysan noolaan lahayn haddii aysan ninka odayga ah iyo wiilkiisa garab u noqon lahayn.
Laakiin Mr Singh ayaa diiday in loo mahad celiyo, wuxuuna sheegay inuu bixinayay deyn horay loogu lahaa, kaddib markii sidaas oo kale loo babdaadiyay xilli ay rabshado ka socdeen magaalada Delhi, 36 sano ka hor.
Labada nin ayaa halyeeyo ka noqday waqooyiga-bari ee Delhi.
“Waxaan aaminsanahay in aan dhammaanteen nahay bani’aadan, dadka ma aannaan u eegeynin inay muslimiin yihiin, balse waxaan u eegeynay inay bani’aadan yihiin”, ayuu yiri Mr Singh.
Qaar ka mid ah dadka rabshadaha waday ayaa dhagaxyo ku weeraray masaajidyada, sida uu sheegay Mohammad Hamza.
Qalalaasaha salka ku hayaha sharciga cusub ee dhalashada ayaa socday dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo mudaharaadyo waaweyn ay ruxeen dalkaas.
Dadka ayaa ka carooday kaddib markii ay dowladda sharcigaas ku sheegtay in qaxootiga dalalka dariska ah kasoo barakaca la aqbali doono kuwa aan muslimiinta ahayn kaliya.
Rabshadihii ugu xumaa ayaa isbuucii lasoo dhaafay dhacay, xilli uu waddanka Hindiya booqasho ku joogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.